Gulfstream G600 iji mee Mbido Australia
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Gulfstream G600 iji mee Mbido Australia
Gulfstream Aerospace Corp. kwupụtara ọkwa ụgbọ elu ya kachasị ọhụrụ, klas ahụ, na-emeri mmeri Gulfstream G600, ga-eme mbido Australia na Australian International Airshow na Aerospace & Defense Exposition si Febrụwarị 26 ruo Machị 3 na Geelong, Victoria. Banye na Gulfstream G600 na ngosipụta ngosipụta ga-arụ nnukwu ọrụ Gulfstream G550 na ebe obibi anọ, flagship Gulfstream G650ER.
"The Asia-Pacific mpaghara na-aga n'ihu ịbụ otu n'ime ahịa mba ụwa kachasị ike, nke gosipụtara site na nnukwu mmụba mpaghara ụgbọ mmiri n'ime afọ iri gara aga, ”ka kwuru Akara Marks, president, Gulfstream. "Anyị nwere obi anụrịị igosipụta ụgbọ elu kachasị ọhụrụ anyị, mmeri, akwụkwọ dị ọcha Gulfstream G600, dịka akụkụ nke mbido Australia ya."
"Anyị na-showcasing G600 gburugburu ụwa, na ndị ahịa nzaghachi na mmasị maka nke a niile-ọhụrụ ugbo elu kemgbe kemgwucha mma," kwuru Burns. "Ihe ngosi anyị nke Australian na-anọchite anya ụgbọ elu kachasị mma nke na-enye nso, ọsọ na ikike ịkwụ ụgwọ dị mkpa maka ndị ahịa iji rụọ ọrụ dị mfe na mpaghara ahụ."
Ihe kariri ugbo elu 335 Gulfstream na aru oru na Asia-Pacific mpaghara. Ihe kariri 290 n'ime ha bu ulo buru ibu.
G600 nwere ike ife 5,500 nautical kilomita / 10,186 kilomita na nnukwu ọsọ ụgbọ mmiri ya nke Mach 0.90 - na-ejikọ isi mba ụwa. Na-etu ọnụ n'ụlọ kachasị ogologo na klaasị ya, ime ihe na-enye onyinye nke ụgbọ elu nwere ike ịnabata ndị njem 19 ma hazie ya n'ime ebe atọ na ndị ọrụ ezumike. Site na windo windo 14 Gulfstream panoramic oval, pasent 100 nke ikuku ọhụrụ, obere ụlọ dị ala na nhọrọ iji wụnye ịsa ahụ, a na-ahazi G600 maka ezigbo nkasi obi ndị njem na nrụpụta. Ejiri G600 kwenyekwa na akara aka na-emeri Symmetry Flight Deck ™, ụgbọ elu ụgbọ elu kachasị elu na njem ụgbọ elu.
G650ER nwere ike ijikọ n'ụzọ dị mfe Los Angeles na Melbourne, Australia, ma mee ya na 14 awa na 58 nkeji, na-eguzobe ihe ndekọ obodo na nwoke. Ruo ugbu a, ezinụlọ G650 nwere ihe karịrị 85 ndekọ ọsọ ọsọ. Glọ G650ER nwere ike ịnabata ndị njem 19 ma mee ka ọ dị elu site na windo 16 Gulfstream panoramic oval, obere ụlọ dị elu na ahụmịhe ụlọ dị jụụ.
G550 nwere ike ofufe 6,750 nm / 12,501 km na-enweghị nkwụsị ma gosipụta oke ya na ike ọsọ ya na ndekọ njikọ obodo Kailua-Kona, Hawaii, na- Melbourne n’ime awa iri na isii na nkeji iri anọ na otu. Amara dị ka ụgbọ elu nwere arụmọrụ dị egwu, a na-ejikarị G10 eme ihe dị ka ikpo okwu pụrụ iche maka gọọmentị gburugburu ụwa.
Gulfstream ga-adi na chalet N17.